Khitamyin - Page 101 of 103 - Media and Entertainment
January 21, 2021Ko Khit0 Comments
(၁၀) တန်းအမှတ်မီသော်လည်း တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဖို့ အခက်အခဲရှိသူများ ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းတွင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေ လျှောက်ထားနိုင်…
January 19, 2021Ko Khit0 Comments
ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၉ရက် ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဆေးတက္ကသိုလ်တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ ၅ဦး စက်မှုတက္ကသိုလ်တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ ၅ဦး ဥပဒေ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ ၂ဦး စုစုပေါင်း…
ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် ပိုက်ဆံချေးပြီး စိတ်သောကရောက်နေလျှင်…
ပိုက်ဆံချေးပြီး ဆုံးမလိုဖြစ်နေလျှင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် စိတ်သောက ရောက်နေလား ချေးထားသူမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ ပြန်မပေးပဲ ကြန့်ကြာအောင်အချိန်ဆွဲနေလား ရစရာရှိသူ ငွေချေးထားသည့် ငွေရှင်သည် တနင်္ဂနွေသားသမီး ဖြစ်ပါက မွေးနေ့ နေ့လည်…
စီးလာတဲ့ကိုယ်ပိုင် ကားမှအားမနာ ရေဆေးဆီလိုက်လုပ်ပေးတဲ့ အလုပ်သမားရဲ့ ဖုန်းကိုမှ လုပ်ရက်လိုက်တာ ( ဗီဒီယိုဖိုင် ပါဝင်ပါသည်။ )…
စီးလာတဲ့ကိုယ်ပိုင် ကားမှအားမနာ ရေဆေးဆီလိုက်လုပ်ပေးတဲ့ အလုပ်သမားရဲ့ ဖုန်းကို အလစ်သုတ်သူ ( ဗီဒီယိုဖိုင် ပါဝင်ပါသည်။ ) စီးလာတဲ့ကားမှအားမနာ ကားစီးနိုင်တဲ့လူတန်းစားထဲက ဖြစ်ပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ကတော့ ဟိုး. ….
မျက်စိဝေဒနာရှင်များ အဓိဋ္ဌာန်ပြု လှူဒါန်းမှုများပြားနေသော ထူးခြားလှတဲ့ “ဆုတောင်းပြည့်ရွှေမျက်မှန် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး” ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်း ရွှေမျက်မှန်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးသည် ပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း)၊ ရွှေတောင်မြို့တွင် ကိန်းဝပ်စံပယ်လျက်ရှိသော သမိုင်းဝင် တန်ခိုးကြီးဘုရားများတွင် တစ်ဆူအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။…
ဇာတ်ပွဲကြည့်အပြီးမှာ ဟိုဟာအပြုခံရတဲ့ အပျိုကြီး တရားရုံးတွင် မရှက်တမ်း အကုန်ပြောပြ…
January 17, 2021Ko Khit0 Comments
တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးခံရမည့် တရားလိုအပျိုကြီးမမမှာ တရားသူကြီးရှေ့၌ မျက်နှာလေးငုံ့ကာရပ်နေလေသည် တဖက်တရားခံရှေ့နေမှ မေးခွန်းစတင်မေးမြန်း တရားခံရှေ့နေ…ဖြစ်သွားတဲ့နေရာက ဘုရားပွဲဇာတ်စင်ရှေ့မှာဆိုတာဟုတ်ပါသလား အပျိုကြီးမမ..ဟုတ်ပါတယ်ရှင့်……… တရားခံရှေ့နေ… ဒါဖြင့် လူတွေအများကြီးရှိကြမှာပေါ့ အပျိုကြီးမမ…ရှိကြပါတယ် ဘုရားပွဲလာကြည့်တော့…
ကိုဗစ် ပြည်တော်ပြန်သွားလို့ အရေးပေါ်ဆေးရုံတွေ တည်ဆောက်နေရပြန်ပြီတဲ့…
တရုတ်ပြည်ဟာ ကိုဗစ်လူနာတွေထားဖို့ဆေးရုံကိုငါးရက်နဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ခုတင် ၁၅၀၀ ဆန့်ဆေးရုံကို ဟဲ့ဘေးပြည်နယ် နန်ကုံးမှာ (၅) ရက်နဲ့တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကိုဗစ်အတွက်အရေးပေါ် ဆေးရုံ…
သော့ပေါင်း (၁၃) ချောင်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီးမှ ပူဇော်ကန်တော့ခွင့်ရမဲ့ ရှေးဟောင်းရွှေဆင်းတုဘုရား…
မကွေးတိုင်း ရေစကြိုမြို့နယ်က မအူရွာ (အလယ်)ရဲ့ အမွေအနှစ်တွေထဲကတစ်ခု။ သော့ပေါင်း (၁၃) ချောင်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီးမှရွှေဆင်းတုဘုရားကို ပူဇော်ကန်တော့ခွင့်ရမယ်။ရွှေဆင်းတုဘုရားကို ဖူးမြော်ဖို့ဆိုရင် ဂေါပက (၅) ယောက်ဆုံပြီး သော့ငါးချောင်းနဲ့ ပထမတဆင့်ကိုဖွင့်ပြီးမှ ဒုတိယတံခါးကသော့သုံးချောင်း…
တန်ဖိုးမသိလို့ ဒေါ်လာတွေကို မီးရှို့ပစ်နေမိတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ…
January 16, 2021Ko Khit0 Comments
ကျုပ်တို့နိုင်ငံက သရက်ပင်က ကြွေကျတဲ့သရက်ရွက်ကို အမှိုက် ဟုယူဆနေကြသော်လည်း ရောဂါတော်များများအတွက် ဆေးဖက်ဝင်ပါသတဲ့။တစ်နေ့တစ်နေ့ ကိုယ်ဟာဒေါ်လာတွေကို မီးနဲ့ရှို့နေသူပါ ကိုယ်တွေဆီမှာအမှိုက်ရှုတ်လို့မီးရှို့နေရတဲ့သရက်ရွှက်ခြောက် သူတို့ဆီမှာတန်ဖိုးသိလို့တန်ဖို့ရှိနေလိုက်တာ…. အရမ်းကို အံ့ဩမိ ပါသည် ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံးးး ကျနော်တို့…